Nyochaa PostgreSQL | Motadata
Kedu ihe bụ nlekota PostgreSQL?
PostgreSQL, usoro nchekwa data mmekọrịta mepere emepe, na-enye usoro ajụjụ SQL na JSON, na-eme ka ọ bụrụ otu sistemụ nchekwa data nwere ọgụgụ isi yana ọkwa ụlọ ọrụ. Site na akụkọ ihe mere eme nke afọ 20 mmepe, PostgreSQL bụ otu nchekwa data bụ isi ejiri na ngwa weebụ yana ngwa mkpanaka. Yabụ, ndepụta njirimara dị elu na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime sistemụ nchekwa data kacha amasị ụlọ ọrụ IT. Azụmahịa dị arọ na ịdabere na ya na-eme ka ọ dị mkpa iji nyochaa usoro nchekwa data iji hụ na nchekwa na nnweta.
Na-enyocha ajụjụ PostgreSQL ngwa ngwa na steeti mmemme ozugbo
Ngwá ọrụ nleba anya nke ọgụgụ isi dị ka AIOps na-enye akụkọ mmemme ozugbo gbasara ahụike na ọkwa nke sistemụ nchekwa data PostgreSQL. Nyochaa ihe achọrọ maka eserese dị ike, usoro stats omenala, nyocha arụmọrụ, yana nchịkọta ahụike nkesa na nlekota PostgreSQL. N'aka nke ọzọ, ịchọpụta adịghị ike arụmọrụ na ngwa ngwa ajụjụ bụ ihe anyị na-eme nlekota maka. Mgbe ị na-arụ ọrụ na OLTP (OnLine Transaction Processing), ngwa ahụ anaghị azaghachi ma na-enye nsonaazụ nwayọ; ọ na-agbada ọnụego mkparịta ụka na ahụmahụ onye ọrụ na-egbu mgbu. OLTP bụ otu n'ime omume ndị a na-ahụkarị iji hụ na ajụjụ dị nro. Enwere ụzọ atọ isi amata ajụjụ ndị na-adịghị nwayọ.
-Jiri ndekọ ajụjụ nwayọ nwayọ
-Iji auto_explain na-elele atụmatụ mmezu
-Ịdabere na ozi agbakọbara na pg_stat_statements
Weghara njikwa PostgreSQL
Site na nlekota nchekwa data PostgreSQL, ọtụtụ omume na-abịa nke na-eme ka omume nlekota dị mfe. N'okpuru bụ omume mmemme ole na ole nwere ike ime ka sistemụ nchekwa data gị mara mma na ịnya ụgbọ ala tolitere.
Nyochaa: Lelee ọrụ ọdụ data dị ugbu a na stats DBA-centric, gụnyere nha nchekwa data, ajụjụ kachasị ogologo, ọgbọ faịlụ WAL; mkpọchi, backend ọnọdụ, hit ratio, streaming replication lag, sistemu ibu, na page bloat na otutu sava na mmepụta.
Hazie: Na-enye nlekota njedebe na njedebe nke ọdụ data PostgreSQL na nhazi ahaziri gụnyere nnweta, oke cache, nha tebụl, na metrik ndị ọzọ dị mkpa.
Report: Mbupụ arụmọrụ ozugbo yana akụkọ nnweta nke ngwa ọrụ nlekota PostgreSQL wetara na PDF ma ọ bụ usoro Excel wee kesaa ndị otu ahụ metụtara ozugbo. Chekwa oge na ume ka ịdetu metrik ndị dị mkpa. Mepụta akụkọ na-aga, na nhọrọ nke usoro faịlụ dịka ọchịchọ gị si dị.
troubleshoot: Ịmejuputa nleba anya PostgreSQL nke ọma na-abawanye arụmọrụ nchekwa data, nnweta ngwa ma na-emezi nyocha amụma nke mkpa nchekwa na arụmọrụ index. Nlebanya PostgreSQL gụnyere ma gbatịa ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ, sistemụ nchekwa stat, yana ihe ntanetị.
Metrics igodo maka nlekota PostgreSQL
Gụọ: Ebe nchekwa data PostgreSQL na-anakọta ọkwa nke ọrụ nchekwa data. Ọrụ a gụnyere arụmọrụ nchekwa data yana omume ya. N'ịbụ otu n'ime metrics bụ isi nke omume nlekota oru, ịgụ metrics na-achọpụta na ngwa ahụ nwere ike ịnweta data site na nchekwa data.
dee: Ozugbo ngwa gị malitere ịgụ data sitere na nchekwa data PostgreSQL, ọ dị mkpa iji nyochaa arụmọrụ nke ide data n'ime otu usoro nchekwa data. Ọ bụrụ na njehie ọ bụla na-eme mgbe ị na-ede / na-emelite ihe ọ bụla na nchekwa data, ọ na-egosi nsogbu ndị dị ka abụọ na ntụkwasị obi. Ya mere ọ dị mkpa inwe omume ide/imelite nke ọma iji hụ na ahụike na agwa ngwa ngwa dị.
Ntugharị & ntụkwasị obi: Mgbe ọ bụla enwere mgbanwe na nchekwa data, PostgreSQL na-edekọ ya na Write-ahead-log (WAL) ma na-emelite ibe ahụ. N'otu ụzọ, a na-edobe nchekwa data, ọ na-adịgidekwa ntụkwasị obi. Ozugbo emelitere mmelite ahụ, nchekwa data na-eme WAL iji chekwaa data ahụ. Ka a na-abanye na azụmahịa ahụ na WAL, PostgreSQL na-enyocha ma ọ bụrụ na enwere mgbochi nke ebe nchekwa. N'ọnọdụ ahụ, ọ ga-emelite na ebe nchekwa wee kaa ya ka unyi.
Iji akụrụngwaDị ka ọtụtụ sistemụ nchekwa data, PostgreSQL na-adaberekwa na isi mmalite dị iche iche iji rụọ ọrụ nke ọma. Isi mmalite dị ka diski, ebe nchekwa, CPU, bandwit netwọk, wdg. Nleba anya usoro ọkwa ọkwa nwere ike hụ na isi mmalite dị, na PostgreSQL nwere ike ịnweta metrics achọrọ. Na mgbakwunye, PostgreSQL na-anakọta metrik nke isi mmalite eji arụ ọrụ. Metiri dị ka ojiji akụrụngwa, ọnụọgụ njikọ, ojiji diski, wdg.
Nleta PostgreSQL dị Irè site na Ọrụ Na-arụ ọrụ
Ọ Dị Mfe Ịnọgide: Ngwá ọrụ nlekota PostgreSQL dị ka AIOps ka emebere ma kee ya ka ọ nwee mkpa nlekọta na nhazi dị ala. Ọ nwere ike idowe ọtụtụ nhọrọ, nkwụsi ike na arụmọrụ. Ngwá ọrụ nlekota nchekwa data AIOps dị nnọọ mfe iji chọpụta nsogbu na okwu ndị na-eme ka ọrụ onye ọ bụla dị mfe karị.
Onye Gbanwee Ada: Enwere ike ịhazi nlekota PostgreSQL ma gbatịa ya na mbọ kacha nta. Ngwa nlekota PostgreSQL dị ka nke anyị nwere ike ime mgbanwe maka ụzọ ọhụrụ yana soro ahụike ngwaike ihe nkesa na omume dịpụrụ adịpụ iji dozie nsogbu sava ọ bụla.
Dakọtara nke ukwuu: Site na ọkwa dị elu nke ndakọrịta na mgbanwe, ngwá ọrụ nlekota PostgreSQL anyị na-enyocha ahụike na nnweta nke sava kwadoro. Ọ na-enyocha ojiji akụrụngwa kwekọrọ n'ikike dị na usoro a tụrụ anya ya. Na mgbakwunye, ọ na-elekọta ahụike nke ihe nkesa nchekwa data zuru oke ma na-eji ihe omume dịpụrụ adịpụ rụọ ọrụ na nsogbu sava dị mkpa.
Remarkably Comprehensive: Ọ na-enyere ndị nwere ọgụgụ isi alerts maka ngwa ngwa nchọpụta nsogbu, Monitors na ịdị adị na ahụ ike nke iche iche sava, na-eme ka ihe mfe maka nchọpụta nsogbu site na map nke ngwa na-arụ ọrụ na nke mebere igwe, na nke nchekwa mpịakọta ngwa na-esonyere.
Nyochaa PostgreSQL na AIops
AIOps nke Motadata kwadoro bụ ngwa nleba anya mara mma nke ejiri teknụzụ dị mkpụmkpụ dị ka ọgụgụ isi Artificial na mmụta igwe. AIops na-enyocha nchekwa data PostgreSQL wee nyochaa mmemme niile na-eme. Ngwọta nlekota na-eme ka usoro nchekwa data dị mma na-eme ka ọ bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya ma dị mgbe niile. Site n'inye nghọta ozugbo na metrik, AIOps na-eme ka ị hụ na mmemme niile na-eme ka ị mara maka mmejọ ndị nwere ike ibute tupu ha emebie ihe ọ bụla.